daily newspaper and journal
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတို့၏ မျက်နှာဖုံးပေါ်က သတင်းများနှင့် အယ်ဒီတာ့အာဘော်များ၊ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များစွာနှင့် လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် ထူးခြားသည့် သတင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်များ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးနှင့် ထူးခြားသော ဝေဖန်ချက်များကို အနှစ်ချုပ် တင်ဆက်ထားသည့် နေ့စဉ် အစီအစဉ်။
DVB TV – သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ်
624 April 23, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ထွက်တဲ့သတင်းစာဂျာနယ် ကောင်းနိုးရာရာများကို ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – ပြည့်ဘုန်းအောင်၊ ဟေမာဝင်း တည်းဖြတ်၊ ရိုက်ကူး – ဒီဗွီဘီ
595 April 22, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၂ ရက်နေ့ သတင်းစာဂျာနယ်များ ကောင်းနိုးရာရာများကိုကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – အောင်သူ၊ ပြည့်ဘုန်းအောင် ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ် – ဒီဗွီဘီ
541 April 19, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – အောင်သူ၊ စည်သူဇေယျ ရိုက်ကူး – ဒီဗွီဘီ
693 April 18, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ သတင်းစာ ဂျာနယ်များ ကောင်းနိုးရာရာတွေ ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – သူဇာလင်း၊ အောင်သူ
744 April 12, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကောင်းနိုးရာရာတွေ ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – ထွန်းထွန်းသိန်း၊ သူသူအောင်
582 April 11, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – အောင်သူ၊ စိုးယုဇော် ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ် – ဒီဗွီဘီ
597 April 10, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကိုကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – သူဇ်ာလင်း၊ ဆုဆုသွယ်
597 March 21, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ၇က်နေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကိုကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ် တင်ဆက် – အာကာ ၊ ဟေမာဝင်း
555 March 20, 2017
DVB TV – ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ထွက်လာတဲ့သတင်းစာ ဂျာနယ်များကို ကောက်နုတ်တင်ဆက်ထားတဲ့ သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ အစီအစဉ်
ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် မင်းပြားတွင် သောက်ရေကန် ၅၇ ကန် ရေနစ်မြုပ်
မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်တွေထဲက မင်းပြားမြို့နယ်မှာ ရေကန် ၅၇ ကန် ရေတွေ[...] The post ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် မင်းပြားတွင် သောက်ရေကန် ၅၇ ကန် ရေနစ်မြုပ် appeared first on DVB.
အီးယူက ထပ်ဆောင်းခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့် ဒေသတွင်း ထုတ်ကုန်များ တိုးလာနိုင်
ဥရောပ သမဂ္ဂရဲ့ ထပ်ဆောင်းခွန် တုံ့ပြန်ချက်ကြောင့် ဒေသတွင်း ထုတ်ကုန်တွေ တိုးလာနိုင်တယ်လို့ မီဒီယာတွေက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂ[...] The post အီးယူက ထပ်ဆောင်းခွန်ကောက်ခံမှုကြောင့် ဒေသတွင်း ထုတ်ကုန်များ တိုးလာနိုင် appeared first on DVB.
မိုရီဆာကီဝင်း၏ ဓာတ်ပုံစာအုပ် ဂျပန်တွင် စတင်ရောင်းချ
ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဂျပန်အဆိုတော်မိုရီဆာကီဝင်း မြန်မာပရိသတ်အခေါ် အ၀င်း ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဓာတ်ပုံအလှနဲ့ အင်တာဗျူးတွေပါဝင်တဲ့စာအုပ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို[...] The post မိုရီဆာကီဝင်း၏ ဓာတ်ပုံစာအုပ် ဂျပန်တွင် စတင်ရောင်းချ appeared first on DVB.
ကြို့ပင်ကောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အကြို လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ခြမ်း၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် ကြို့ပင်ကောက်မြို့မှာ န်လ(၁၇)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၃ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အကြို လူထုလှုပ်ရှားမှုတရပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။[...] The post ကြို့ပင်ကောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အကြို လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ် appeared first on DVB.
ရန်ကုန်မြို့တွင် နောက်ဖေးလမ်းကြား ကလေးကစားကွင်းနှင့် အပန်းဖြေဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ်
နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေမှာ အမှိုက်ကင်းစင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ကလေးကစားကွင်းနဲ့ အပန်းအဖြေဥယျာဉ်ဖွင့်ပွဲကို ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေက ရန်ကုန်မြို့[...] The post ရန်ကုန်မြို့တွင် နောက်ဖေးလမ်းကြား ကလေးကစားကွင်းနှင့် အပန်းဖြေဥယျာဉ် ဖွင့်လှစ် appeared first on DVB.